Mino Raiola oo si kulul kaga hadlay xaallada uu Pogba kaga sugan yahay Man United – Gool FM
Dajiye December 31, 2019
(Manchester) 31 Dis 2019. Mino Raiola oo ah wakiilka xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa dabka ku shiday kooxda Manchester United, isagoo ku eedeeyay inay sabab u yihiin hoos u dhaca ku yimid xiddiga uu wakiilka u yahay dhawaanahan.
Paul Pogba ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Manchester United suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, maadaama uu laacibka sheegay inuu doonayo tijaabinta loolan cusub ee meel kale ah.
Dhinaca kale Pogba ayaa muujiyay sida uu u jecel yahay ka hoos shaqeynta tababaraha reer France ee hoggaamiya kooxda Real Madrid Zinedine Zidane, laakiin heshiiska lama dhameystirin, sababa la xiriira dhaqaalaha ay codsadeen saraakiisha Red Devils.
Mino Raiola ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Pogba uu ka tago safka kooxda Manchester United sida ugu dhaqsida badan si uu dib ugu helo qaab ciyaareedkiisii lagu yaqiinay, wuxuuna sidoo kale cadeeyay inuu ku laabanayo Juventus mar kale.
Wakiilka xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa wareysi uu bixiyay waxaa soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan la dagaalamay Ferguson, waa qofka kaliya ee i dhahay maya, waligiis ma aqbalin isaga”.
“Dhibaatada haatan ee Pogba waa kooxda Manchester United, waa koox ku nool wax ka baxsan xaqiiqada, isla markaana aanan laheyn mashruuc isboorti”.
“Qofna halkaas kuma fiicnaan doono, waxay burburin doonaan xitaa Maradona, Pele iyo Maldini, Pogba wuxuu u baahan yahay ciyaartooy iyo koox, sidii ay ahayd Juventus”.